बलिउड/हलिउड Archives - Page3of 21 - Medianp.com
‘दोस्ताना २’ : को हो लक्ष्य ? जो करण जौहरको फिल्मबाट गर्दैछन् बलिउडमा इंन्ट्री
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:०४0
काठमाडौँ । फिल्म ‘दोस्ताना २’ मा कार्तिक आर्यन र जाह्रवी कपूरको साथमा अभिनेता लक्ष्य पनि अभिनय गदैछन् । यो कुराको फिल्मको निर्देशक करण जौहरले खुलासा गरेका हुन् । त्यसैले दर्शकहरुको आखिर को हो लक्ष्य भनेर
‘कुछ कुछ होता है’ को रिमेक बनेमा को को हुनेछन् कलाकार ? करण जोहरले गरे खुलासा
काठमाडौँ । कुनै फिल्मले यस्तो इतिहास बनाएको छ ,जुन फिल्म सम्झने बितिकै फरक अनुभूति हुन्छ । त्यसमध्ये १९९८ मा रिलीज भएको फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ पनि यस्तै छ । फिल्ममा शाहरुख खान, काजोल र
सनी देओलको छोरा करणको डेब्यू फिल्म ‘पल पल दिल पास’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:४१0
काठमाडौँ । सनी देओलको छोरा करणको फिल्म ‘पल पल दिल पास’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा करणको आफ्नो रोमान्टिक साइडको साथमा सेठीसँग देखिएका छन् । सन्नीको डेब्यू फिल्म जस्तै छोराको पनि रोमान्टिक फिल्म
सलमान खानले विहे नगर्नुको कारण उनको बुबाले गरे खुलासा
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००७:३७0
काठमाडौँ । बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान ५३ वर्षको भएका छन् । उनको विवाह गर्ने उमेर वितिसकेपनि अहिले पनि कुनै न कुनै नायिकासँग विवाहको चर्चा चलिरहेको हुन्छ । त्यसका साथै उनको फ्यान र मिडियाहरुले पनि सलमानलाई
आमिर खानले ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’को लागी माफी माग्दा यसरी बने ट्रोलको पात्र
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००५:५४0
काठमाडौँ । बलिउडको सुपरस्टार अभिनेता आमिर खान वर्षमा एक फिल्म बनाउछन् । जुन फिल्म बक्स अफिसमा सुपरहिट हुन्छ । तर उनको पछिल्लो फिल्म ठग्स अफ हिन्दोस्तानले बक्स अफिसमा खासै राम्रो ब्यापार गरेन् । फिल्म फ्लप
प्रभासको फिल्म ‘साहो’ को बक्स अफिसमा विश्वभरको ग्रस कलेक्सन : ५ दिनमा कमायो यति करोड
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०११:५३0
काठमाडौँ । अभिनेता प्रभासको फिल्म ‘साहो’ ले रिलिजको ५ दिनमा कुल लागतको पूरा पैसा कमाएको छ । यस फिल्मले ५ दिनमा ३५० करोड रुपैया ब्यापार गदै कुल लागत उठाएको निर्माताले ट्वीट गदै जानकारी दिएका हुन्
रणवीर कपूर र आलिया भट्टको विवाह : के यो जोडीले गुपचुप गरेका हुन् विवाह ?
काठमाडौँ । अहिले रणवीर कपूर र आलिया भट्टको विवाहसँग जोडिएका एक तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । तस्विरमा दुवैजना विवाहको मण्डपमा एकअर्काको गलामा हार पहिराउनको लागी तयार लगाएका छन् । तर वास्तवमा , यो रणवीरको
‘केजीएफ २’ : अदालतले लगाएको थियो फिल्मको शूटिङमा रोक , अब निर्माताले लिए यस्तो फैसला
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००९:३७0
काठमाडौँ । केही दिनअघि ‘केजीएफ २’ को फ्यानहरुको लागी एक नराम्रो खबर आएको थियो । किनभने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास कोर्टले फिल्मको शूटिङमा रोक लगाएको थियो । बताए अनुसार अब फिल्म कानुनी रुपमा फसेकाले यसको
सलमानले ‘बाजिगर’ छाड्दा चम्केको थियो साहरुखको भाग्य , के अब फेरी चम्केला ?
काठमाडौँ । अभिनेता सलमान खानले अहिले संजय लिला भंसालीको फिल्म ‘इन्शाअल्ला’ नगर्ने भएका छन् । फिल्मको सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि सलमान छोडेका थिए । जसले गर्दा अहिले अभिनेताको खोजी भइरहेको छ । जसमा निर्देशक
अभिनेत्री ब्रुना बनिन् विवाहअघि नै आमा , छोरीको नाम के ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:४८0
काठमाडौँ । अभिनेत्री ब्रुना अब्दुल्लाह आमा बनेकी छन् । उनी विवाहअघि नै गर्भवती भएकी थिइन् । गत वर्ष उनले एक अन्तरवार्तामा विवाह अघि नै गर्भवती बन्नु राम्रो हो भन्ने प्रश्नमा विवाह भनेको सगै बस्ने एक